admin, Author at Chothale
काठमान्डौँ । यो दुनियाँमा यस्तो गाउँ पनि छ, जहाँ केटीहरुलाई कुनै केटा पाउन मुस्किल छ र बिहे नगरीकनै जोवन बितिरहेको छ । जीवन साथी पाउने आशमा युवतीहरुले दिन गुजार्न र पाको उमेरसम्म पनि कुमारी नै बस्न बाध्य छन् उत्त गाउँका युवतीहरु । ब्राजिलको एक गाउँको अवस्था यस्तो छ । झण्डै ६ सय महिलाको जनसंख्या रहेको यो गाउँमा ३ सय भन्दा धेरै युवतीहरुको बिहे हुन बाँकी छ र उनीहरुलाई बिहे गर्नका लागि केटा फेला परेका छैनन् । बिहे नगरीकनै बस्न बाध्य ती युवतीहरुको उमेर १८ देखि ३० वर्षसम्मको रहेको जनाइएको छ। जाकारहरुकाअनुसार…
१६ साउन, चितवन । सरकारले साउन १५ गतेदेखि पर्यटन र होटल क्षेत्र सुरक्षा सर्तकता र सावधानी अपनाएर खोल्ने निर्णय गरेपछि चितवनको सौराहाका होटल सञ्चालनमा आए । तर, चितवनकै पर्यटकीय गन्तव्य पटिहानी र मेघौलीका ठुला होटल भने सञ्चालनमा आएका छैनन् । मध्य बर्खाको सिजन तत्कालै पर्यटक आउने सम्भावना कम भएकाले हतारमा होटल खोल्नुनपर्ने सञ्चालकहरु बताउँछन् । पटिहानीको होटल भिल्लाका सञ्चालक सविन पौडेलले भदौ १ गतेदेखि खोल्ने मनस्थिति रहेको बताए ।तत्कालै फुल फ्लेजमा चलाउने अवस्था छैन, मेन्टिनेन्स गर्ने र दशैं तिहारपछि पूर्ण रूपमा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा छ’ सञ्चालक पौडेलले भने,…
यो गुफामा छ भगवान गणेशको काटिएको शिर – पढेर सच्चा मनले सेयर गर्नुहोला !
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा भगवान गणेशलाई प्रथम पुज्य देवताका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । भनिन्छ भगवान शिवले क्रोधमा आएर गणेशजीको शिर काटिदिएका थिए । पछि माता पार्वतीले भनेपछि भगवान शिवले हात्तीको टाउको ल्याएर जोडिदिएका थिए । तर भगवान गणेशको शिर कहाँ राखिएको थियो भन्ने कुरा सायदैलाई मात्र थाहा होला । भगवान शिवले गणेशजीको वास्तविक शिर एउटा गुफामा राखेका थिए । उक्त गुफा भारतको उत्तरखणडस्थित पिथौरागढमा रहेको छ । यस गुफालाई पाताल भुवनेश्वरको नामबाट पनि चिन्ने गरिन्छ । यसको वर्णन स्कन्द पुराणमा गरिएको छ । जहाँ गणेशजीको शिर रहेको छ त्यहाँ भक्तहरुको आस्थाको केन्द्र…
युट्युबमा अपलोड भएको पहिलो भिडियो कुन हो ?
एजेन्सी । युट्युब बारे अब विश्व जगत अनभिज्ञ छैन । इन्टरनेट चलाउँने सबैलाई यो बारे थाहा छ । यही प्लाटफर्ममा भिडियो अपलोड हुन थालेको १५ वर्ष पुगेको छ । सन् २००५ को फेब्रुअरीमा स्थापना भएको युट्युबमा अप्रिल २३ तारेखमा पहिलोपटक भिडियो अपलोड गरिएको थियो । उक्त भिडियो कुन हो ? कस्तो थियो ? सबैको चासोको विषय हो । आज हामी त्यही बारे जानकारी दिँदैछौ । युट्युबका सहसस्थापक जावेद करिमले पहिलोपटक १८ सेकेण्डको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेका थिए । ‘Me at the zoo’ शीर्षकको उक्त भिडियोमा करिमले आफू चिडियाखाना जाँदाको दृश्य…
प्रधानमन्त्रीले भगवान रामबारे दिएको बयानलाई लिएर भारतमा नेपालीमाथि यतिसम्मकोअत्याचार
काठमाडौं । भारतमा नेपालीहरु माथि समस्या पर्न थालेको छ । नेपाल र भारतबीचको सिमा विवाद र त्यस पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्याका विषयमा दिएको अभिब्यक्तिले भारतमा बस्ने नेपालीहरु अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन् । भारतियले नेपालीहरुलाई ज’बरज’स्ती कपाल खौरिदिएर अपमानित गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अयोध्याका बारेमा गलत अभिब्यक्ति दिएको भन्दै भारतका नागरिकले नेपालीलाई ज’वरज’स्ती गर्न थालेका हुन् । भारतीय नागरिकले नेपालीहरुलाई विभिन्न आरोप समेत लगाउन थालेका छन् । भारतको विश्व हिन्दु सेनाले बिहीवार वनारसमा रहेका नेपालीलाई अपमानित गर्दै जवरजस्ती कपाल खौरिदिन थालेको त्यहाँ रहेका नेपालीले जनाएका छन् । उनीहरुले…
१५ असार, डोटी । डोटीको के.आई. सिंह गाउँपालिका–४ का २६ वर्षीय राम जोशी जेठ १७ गते भारतको मुम्बईबाट आफ्नो गाउँ पुगे । सँगै आएका अन्य ३५ जनासहित उनलाई स्थानीय झिमेमालिका माविको क्वारेन्टिनमा राखियो । सुरुमा उनलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने भनिएको थियो तर दिनगन्तिका हिसाबले उनी क्वारेन्टिनमा बसेको आज ३० दिन भयो ।भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएका के आई सिंह–४ का २२ वर्षीय मिलन कार्की पनि क्वारेन्टिनमा बसेको आज ३० दिन भयो । सोही दिन भारतको पञ्जाबबाट आएका लोकबहादुर विक पनि सोही क्वारेन्टिनमा छन् । राम, मिलन र लोक मात्रै…
मदन भण्डारीले ओलीलाई किन भन्थे ‘बातबहादुर’ ?
ज्योतिषशास्त्रअनुसार ‘खड्गो’ भनेको व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा देखिने एउटा महाविपत्ति हो, जसलाई छिचोल्न सकियो भने जीवन फेरि सहज बाटोमा अघि बढ्छ । यहाँ ”कम्युनिस्ट” प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जन्मकुण्डली हेर्न खोजिएको हैन । कम्युनिस्टहरु जन्मकुण्डलीमा विश्वास गर्दैनन् । यहाँ, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर दुबै मोर्चामा व्यहोर्नु परिरहेको राजनीतिक संकटबारे विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । सरकार र पार्टीको शीर्षस्थानमा आसीन ओलीलाई अहिले महाविपत्ति आइलागेको छ । आफ्नै पार्टीको अन्तरविरोधको परिणामस्वरुप ओली सरकारमाथि खड्गो परेको छ । बुधबार बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू घेराबन्दीमा परेको स्वीकार गरिसकेका छन् । बाहिरबाट त…
रामकाे नाम जपेर मुटु छाम्दै बसमा सरर
मनाङ । हिमालपारिको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङका बासिन्दालाई नेपालको राजधानी र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पुग्न धेरै कठिन छ । जिल्लाबाहिर आवतजावत र सामग्री ढुवानी गर्ने मनाङवासीको यही एउटै सडक न हिउँदमा र नत वर्षायाममा नै सुरक्षित र सहज छ । हिउँद याममा हिउँ पर्ने भएकोले विकासका काम गर्न सकिँदैन भने वर्षामा पहिरोका कारण सडक निर्माण या अरु कुनै निर्माणसम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । मनाङवासी वर्षायाममा यो बाटो हिँड्दा कतिबेला कहाँबाट पहिरो आएर पुर्ने हो भन्ने त्रासले पहरोतिर हेर्दै भगवान पुकारेर यात्रा गर्न विवस छन् । सधैँ यस्तै जोखिममा…
अटेर गर्दै भारतले लिपुलेकमा धमाधम सडक बनाउँदै
दार्चुला । नेपालको पटक पटकको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै भारतले लिपुलेक पास हुँदै चीनको मानसरोबर जाने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। हेलिकोप्टरबाट डोजरसहितका ठूला मेसिन झारेर भारतले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। धार्चुलादेखि लिपु पाससम्मको करिब ८० किलोमिटर लामो सडकखण्डको उत्तरी क्षेत्रमा भारतले निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। ठूला मेसिन र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर सडक बनाउँदा सीमा नदी महाकालीको बहाव नै साँघुरिएको छ। विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर सडक बनाउँदा महाकालीमा ठूला ठूला चट्टान थुप्रिएका छन्। ठूला चट्टान र माटो थुप्रिँदा महाकालीको बहाव साँघुरिएर माथि आएको छ। नेपालको…